Canbaarayn Caallami Ah Oo Laga Soo Saaray Weerarkii Hubaal Iyo Digniino Ku Waajahan Xukuumadda Somaliland | Araweelo News Network (Archive) -
Canbaarayn Caallami Ah Oo Laga Soo Saaray Weerarkii Hubaal Iyo Digniino Ku Waajahan Xukuumadda Somaliland
New York (Arraweelo News)Guddida caalamiga ah ee difaaca xuquuqda suxufiyiinta ee loo yaqaan CPJ ayaa si adag u Cambaareeyey falkii
toddobaad ka hor lagu soo weeraray xarunta Wargeska Hubaal, kaas oo aan illaa hadda xukuumadda Somaliland wax tallaabo ah ka qaadin marka laga reebo nin askari ah oo u xidhan.
Guddida Caalamiga ah ee Difaaca Suxufiyiinta ee CPJ magacooda loo soo gaabiyo (Committee To Protection Journalists) ayaa warbixin ay xalay ka soo saareen xaruntooda Magaalada New York ee dalka Maraykanka waxa ay si adag ugu eedeeyeen xukuumadda Siilaanyo inay soo maleegtay dilkii dhawaan fashilmay ee la doonaayey in lagu khaarajiyo maareeyahii guud ee wergeyska HUBAAL Maxamed Axmed Jaamac (Calooley). Warbixinta CPJ oo Saaka lagu soo daabacay Wargeyska Guunka ah ee New York Times, isla markaana ay ku shaaciyeen boggooda internetka ayaa hor dhac looga dhigay “Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Somaliland ayaa xaqiijiyey nimankii weerarka isku dayga dilka ah dhawaan doonaayey inay ku khaarajiyaan Maareeye Maxamed Axmed Jaamac ay ahaayeen Boolis”. Qoraalka warbixintan isagoo sii socda waxa uu faahfaahin ka bixiyey sidii falku u dhacay, “laba nin oo afka soo duubtay ayaa weerar ku soo qaadey xarunta wargeyska HUBAAL oo ku taalla caasimadda Hargeysa abaaro 11:30 habeenimo iyadoo wakhtigaasi hawl-wadeenadda HUBAAL ku jireen hawl ay dib ugu eegayaan nuqullada wararka wargeyska ku soo baxaayey maalinta xigtay (khamiistii)”. CPJ oo Xiganaysa Saxaafadda Maxaliga ah ee Somaliland waxa ay intaa ku ladhay, “sida ay warbaahinta maxaliga ahi tabiyeen mid ka mid ah labada nin ee habeenkaas weerarka ku soo qaaday xarunta wargeyska wuxuu xabbad rasaas ah ku riday Maxamed Axmed Jaamac Agaasimaha HUBAAL, laakiin wuu la waayey oo kumay dhicin. Maxamed, waxaa dhaawac ka soo gaadhay gacanta oo jabtay iyo faraha oo iyaguna jabay iyadoo isla wakhtigaasi falku dhacay ay hawl-wadeennada Wargeysku awoodooda iskugu geeyeen sidii mid ka mid ah labada nin ee weerarka soo qaaday ay u qaban lahaayeen, kaas oo ay ugu danbayntiina u suurtagashay inay qabtaan”. Sida uu CPJ u sheegay Abdillahi Adam Omar, chairman of Hubaal Media Network. Maxamed waa Maareeyaha Hubaal Media Network, kaasi oo soo saara Warsidaha Afsoomaaliga ah ee Hubaal iyo The Independent oo Isagu afka Ingiriisiga lagu daabaco. Sida auu CPJ u Sheegay Hubaal Editor-in-Chief Hassan Hussein Abdillahi.
Sabab Loo Bar-tilmaameedsaday Hubaal
Difaacayaasha Saxaafadda Caalamiga ah ee CPJ, waxa ay warbixintooda ku tilmaameen in Wargeyska Hubaal uu Maalmo ka hor Intaan Lasoo weerarin daabacay Qoraalo iyo warar ku saabsan Wasiirka Madaxtooyadda Somaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan oo isagu Isagu Ka mid ahaa Wefti Madaxweyne Siilaanyo oo London Ku Sugnaa, waxaanay sheegtay inuu jiro tuhun laga qabo Madaxtooyadu ku lug leedahay falkan.
“Todobaadyadii uu dambeeyey waxa Wargeyska Hubaal dhaliilo ka qoray Maamulka Dawladda Somaliuland ee Madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo, sida uu noo sheegay Guddoomiye Cabdillaahi.
Waxa kalo wargeysku dhaliilay wasiirka Arrimaha Gudaha oo kala xigtaystay warbaahinta ka jirta dalka gudihiisa, gaar ahaan mar uu ka warramay dhacdadii halista ahayd ee horaantii bishii April ka dhacday Deegaanka Caynabo oo ay shirkadaha baadhista shidaalka sahaminayaan halkaas.
Wargeyska Hubaal waxa kale oo uu Dhawr warbixinood ka daabacay Musuq maasuq lagu xidhiidhinayo qaar kamid ah masuuliyiinta Xukuumadda Siilaanyo, sida uu CPJ u sheegay Tifaftiraha WArgeysku. Dabayaaqadii bishii March Ciidammada Bilayska Somaliland ayaa xabsiga u taxaabay Jaamac Cilmi oo Maqaalo dhaliilaya Xukuumadda ku qoray Wargeyska Hubaal, dhaliilahaas oo ay kamid yihiin Musuqmaasuq, iyo qabyaalad ay ku kacaan qaar kamid ah masuuliyiinta xukuumadda, taas oo keentay in la xukumo loona cuskado qoddobo ay kamid yihiin Aflagaado qaran, waxaana lagu xukumay xadhig lix bilood ah iyo ganaac lacageed oo Hal Milyan oo Shilinka Somaliland ah.
“Weerarka lagu qaaday xarunta wargeyska Hubaal iyo Maxamed Axmed Jamac waa dhacdo ugub ku ah dalka, taas ka fajicisay shacabka iyo calaamkaba inay laba nin oo ka tirsan ciidamada bilayska oo afduuban weerar ku soo qadaan xarun warbahineed” sidaa waxaa sheegay agaasimaha isku xidhka iyo xuquuqda suxufiga ee CPJ Maxamed Keita. Isaga oo intaa kudaray “Waxaanu ku haysanaa maamulka iyo masuliyiinta ka tirsan Somaliland inay ilaaliyan ammaanka iyo nabadgelyada wargeyska Hubaal iyo hawl wadeennadiisaba, waxanan uga baaqaayna in cidii ka dambaysay dhacdadan iyo kuwa geystayba laa hor keeno caddaalada sida ugu dhakhsahaa badan” ayaa lagu soo gebogabeeyey WArbixinta ay Guddida CPJ ka soo saareen dhacdadii Hubaal ee toddobaad ka hor.
Ka Sokow baaqani ka soo baxay Guddida ilaalinta xuquuqda suxufiyiinta ee CPJ waxaa la filaya maalmaha soo socda in haayado kale oo ay ka mid tahay AMNESTY INTERNATIONAL ay toos uga hadlaan arrintan, oo dhaawac siyaasadeed ku ah xukuumadda Siilaanyo.